जसको अनुहारको ट्याटु छातीमा खोपे उसैको अनुहार भरि छ्यापियो एसीड ! || सुनौलो नेपाल
जसको अनुहारको ट्याटु छातीमा खोपे उसैको अनुहार भरि छ्यापियो एसीड !
जेठ २ काठमाडौं मायाप्रेम दर्शाउँन गरिने धेरै क्रियाकलाप मध्य अहिले धेरै युवायुबतीको रोजाईमा पर्छ माया गर्ने व्यक्तिको रुप नाम आकारको ट्याटु हान्ने प्रचलन । बुधबार राती काठमाडौंमा जेनी खड्काको अनुहारमा एसीड आक्रमण गर्ने उनका श्रीमान बिष्णु भुजेल जसले जेनीको अनुहारको ट्याटु छातीमा सझाएका छन । यसले बिष्णु भुजेल जेनीलाई कुनै समय माया गर्ने बुझ्न सकिन्छ तर मन भने कहिल्यै बुझ्न सकिनन जेनीले । बुधबार राती एकाएक राक्षसी रुप कसरी आयो जसले माया गरेर छातीमा सझाएकी जेनी खड्का अहिले अस्पतालको बेडमा छटपटाई रहेकी छिन् ।
१४/१५ बर्षको कलिलो उमेरमा भागेर बिहे गरेकी जेनीको कोखबाट जन्मेको एक छोरालाई हुर्काउँदै जिबनमा संघर्ष गर्दै बसेकी जेनीको जिबनमा अर्को कालो बादल मडारिरहेको छ। हुन त् जेनीलाइ बिष्णुसंग बिहे गरेको दिन देखिनै जिबन संघर्षमय बन्दै आयो जति बेला जेनी बिष्णुको दोश्रो श्रीमतीको रुपमा बिहे गरेको थाहा भयो ।दोश्रो श्रीमतीको रुपमा बिष्णु भुजेलको घरमा भित्रिएपपछि जेनी बिहेको केहि समय देखिनै माइतीघरमा बस्दै आइन त्यहि कारणनै एसिडको शिकार भईन जेनी खड्का । एसिड आक्रमणबाट जेनीको अनुहार र मन दुवै डढेसंगै एकमात्रा अबोध सन्तानको पनि बिचल्ली हुन् पुगेको छ ।
काभ्रेमा काम गर्ने बिष्णु भुजेल बुधबार जेनीलाई भेट्न काठमाडौं आए उनी सरासर कालोपुल गए जेनीलाई अनेक बहाना गरेर घरबाट बाहिर एकान्तमा लगे । छुट्टाछुट्टै बसेपनि आफ्नै श्रीमानले यति ठूलो घटना गराउलान भन्ने जेनीले कल्पनासम्म गरेकी थिइनन् तर अफसोच तिनै छातीमा ट्याटु हानेका श्रीमान जसले अनुहारमा एसिड खनाई दिए । हारगुहारपछि स्थानीयहरुले तत्कालै नजिकैको ओम अस्पताल पुर्याए पनि ओम अस्पतालमा जलेका बिरामीको उपचार नहुने भएपछि उनलाई कीर्तिपुर अस्पतालको बर्न सेन्टर लगियो ।
एसिड आक्रमणबाट जेनीको शरीर २० प्रतिशत भाग जलेको छ। कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार गराईरहेकी जेनीको अवस्था खतरामुक्त छ । उपचारबाट जेनीको अनुहार, छाती र दुवै हातको घाउ निको त होला तर छातीमा अनुहारको ट्याटु हानेका श्रीमानले एसिड हानेर जलेको जेनीको मन भने कहिल्यै निको हुने छैन ।